ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ. စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး လူသိနည်းတဲ့ အချက် (၁၀) ချက် | Buzzy
ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ. စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး လူသိနည်းတဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
သင့်ကို အံ့အားသင့်စေကာ ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ. စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး လူသိနည်းတဲ့ အချက် (၁၀)ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာမြူဒါတြိဂံဒေသဟာ ကမ္ဘာပေါ်က မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ လျှို.ဝှက်ဆန်းကြယ် ဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၊ Devil’s Triangle လို့လည်း လူပြောများပါတယ် ။ ဒီတြိဂံဒေသဟာ Bermuda ကျွန်းကနေ Miami, USA နဲ့ San Juan, Puerto Rico အထိရှိပြီး ၊ ဒီနေရာမှာ သဘာဝလွန် လျှို.ဝှက်ချက်ပေါင်းများစွာ ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ် ။ သင်ဟာ ဘာမြူဒါတြိဂံဆိုတဲ့ နာမည်ကို မြေပုံပေါ်မှာ ရှာတွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် လူပေါင်းများစွာရဲ. နှလုံးသားထဲမှာတော့ ဒီနာမည်ဟာ ရှိနေပါတယ် ။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတွေ ၊ လေယာဉ်တွေ ၊ သဘောင်္တွေနဲ့ လှေတွေဟာ ဒီတြိဂံမှာ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘာကြောင့်ပျောက်ဆုံးရတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေကတော့ ဝေဝါးစွာနဲ့ပဲ ရှိနေပါသေးတယ် ။ အဲ့ဒီထဲကမှ သင့်ကို အံ့အားသင့်စေကာ ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ. စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး လူသိနည်းတဲ့ အချက် (၁၀)ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာမြူဒါတြိဂံလို့ ခေါ်နေကြပေမယ့် ဒီဒေသဟာ တကယ်တော့ တြိဂံပုံ မရှိပါဘူး ။ ဒီဒေသဟာ တရားဝင် နယ်နမိတ်မျဉ်းမျိုး မရှိသလို ပုံသေ အချိုးအစားလည်း မရှိပါဘူး ။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ရေတပ်ကလည်း ဘာမြူဒါတြိဂံကို တကယ်ရှိတဲ့နေရာအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုထားပါဘူး။
ဘာမြူဒါတြိဂံဒေသဟာ ကမ္ဘာပေါ်က သာမန်မဟုတ်တဲ့ နေရာတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး သံလိုက်အိမ်မြှောင်တွေက မြောက်ဖက်ကို ညွှန်ပြနေပေမယ့် သံလိုက်သတ္တိရှိနေတဲ့ မြောက်ဖက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း များစွာသော လေယာဉ်တွေနဲ့ သဘောင်္တွေဟာ ဒီဒေသထဲမှာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဦးတည်ရာ ပျောက်သွားတက်ကြပါတယ်။
သုတေသီနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Pauline Zalitzki နဲ့ Paul Weinzweig တို့က သမုဒ္ဒရာအောက်မှာ မြို.ကြီးတစ်မြို. ရှိနေတယ်လို့ အခိုင်အမာဆိုပါတယ် ။ ကြီးမားတဲ့ ပစ်ရမစ်ကြီးလေးခု နဲ့ စဖင့်ရုပ်ထုကြီးတွေ ပါဝင်တဲ့ ရှေးဟောင်းမြို.ကြီးဟာ ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ. အနားသတ်မျဉ်းတွေ တဝိုက်မှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ များစွာသော လူတွေကတော့ ဒါဟာ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အတ္တလန်တစ်မြို.ကြီးလို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
သုတေသနပြုလုပ်ချက် မှတ်တမ်းတွေအရ ဘာမြူဒါတြိဂံက မတော်တဆဖြစ်မှုတွေဟာ များသောအားဖြင့် ချဲ.ကားပြောဆိုတာဖြစ်ပြီး အခြားကမ္ဘာ့နေရာဒေသတွေက မတော်တဆဖြစ်မှုတွေလိုပါပဲ။
ဘာမြူဒါတြိဂံထဲက Bahamas’ Andros ကျွန်းမှာ အမေရိကန် အစိုးရက တည်ထောင်ထားတဲ့ Atlantic Undersea Test and Evaluation Center တည်ရှိပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ အမေရိကန်ရေတပ်က သူတို့ရဲ. စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို စမ်းသပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် များစွာသောလူတွေကတော့ ဒါဟာ စမ်းသပ်တဲ့နေရာတစ်ခုထပ် ပိုနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
ဘာမြူဒါတြိဂံရဲ. ရေအောက်ကြမ်းပြင်မှာ များစွာသော မီသိန်းဓါတ်ငွေ့တွေ ရှိနေပါတယ် ။ ဒီဓါတ်ငွေ့တွေ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရေရဲ.သိပ်သည်းဆကို လျှော့ကျစေပြီး သဘောင်္တွေကို နစ်မြုပ်စေတက်ပါတယ်။
Navy Avenger Torpedo Bombers
ဘာမြူဒါတြိဂံမှာ အမေရိကန် စစ်တပ်ရဲ. အကြီးကျယ်ဆုံး ဆုံးရှုံးမှုဟာ ၁၉၄၅ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ။ US Navy Avenger torpedo bombers ငါးစီးဟာ Fort Lauderdale Naval Air Station, Florida ကနေ Bimini ကျွန်းမှာ အဝိုင်းခံနေရလို့ ရန်သူကို တိုက်ဖို့သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မိနစ်ကိုးဆယ်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ရေဒီယိုအော်ပရေတာက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ signal တွေကိုပဲ ဖမ်းယူရမိခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနောက်တော့ ဆက်သွယ်မှု ပျက်ဆုံးသွားခဲ့သလို အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကိုလည်း ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေ့၇တော့ပါဘူး။
No Formal Study
ဘာမြူဒါတြိဂံဒေသက ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို ပုဂ္ဂလိကစူးစမ်းရှာဖွေမှု အနေနဲ့သာ ပြုလုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ နည်းစနစ်ကျတဲ့ သုတေသနတွေတော့ မပြုလုပ်ကြသေးဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။